Sport Archives - Page 2 of 2 - | Page 2
oo billowday duullimaad ay toos ugu tageyso Muqdisho
Kenya oo sheegtay in ay xiriirkii Diblomaasiyadeed
u jartay Soomaaliya
Alexis Sanchez oo ku soo biiray Koxda Manchester United
Ugu dambeyskii Koxda Manchester United waxay soo kordhiyeen ciyaar yahanka u ciyaari jiray Arsenal Alexis Sanchez wuxuu ka ciyaari doonaa nambar 7 waa ciyaar yahan aad iyo aad u farfarcooni badan wana gool yahan si loo yiqaano laga yaabo hal week ka dib inuu kooxda la ciyaari doono. ayaa shaaca ka qaaday xiddiga ugu fiican premier league o haatan ka socda dalka Ingriiska[…]
Manchester United 4-1 Newcastle oo si adag loo graacay ciyaaraha Premier League ee ingriiska
Sabtida, November, 18, 2017 – Cayaartan oo aheyd mid siweyn loo wadda sugayay ayeey Manchester United xaqiiqsatay guusha premier League lugtii ugu danbeysay kaddib markii 4-1 ay ku garaacday kooxda kubadda cagta ee Newcastle.
Cayaaryahanka Bogba ayaa ku soo noqday manchester United marka uu ka maqnaa ciyaaraha manchester united
ku dhowaad laba bilood waxuu garoonka Old Taford ow ku dhigay ciyaar aad aad halis ah.
Ugu danbayn Cayaarta ayaa ku dhamaatay 4-1 ay manchester united ku dubatay Newcastle isla markaana ay taariikh cusub ugu abuurtay kooxaha Ingriiska iyada oo noqotay kooxdii ugu horaysay ee difaacatay koobka Premier league intii qaabka hadda yahay loo dhigay horaantii sagaashamaadkii.
Wararka Maanta ee SRTV Somali
Paul Pogba: Ciyaaryahanka khadka dhexe uga dheela Man Utd oo sheegay ‘in xilligan ay wanaagsan tahay inuu iska tago' Jun 17, 2019
Ukraine oo ku guulaysatay Koobka Adduunka ee ciyaartoyda 20-ka sano ka yar Jun 16, 2019
Frank Lampard: Chelsea waa inay siisaa Derby County £4m si ay u soo fasaxaan tababarahooda Jun 15, 2019
Chelsea waa inay Derby siisaa ilaa £4m oo magdhaw ah haddii ay doonayso in ciyaaryahankoodii hore ee Frank Lampard uu noqdo tababarahooda.